Donald Trump ayaa mar kale u diraya Mareykanka dayaxa | TeraNews.net
Donald Trump wuxuu mar kale u dirayaa Mareykanka bisha
qoraaga artem La daabacay 13.12.2017
Bulshada adduunka ayaa la yaab ku noqotay warkii ka soo baxay Mareykanka, kaas oo madaxweynaha 45 ee Mareykanka, Donald Trump, uu go’aansaday inuu cirka u diro dayax gacmeedka mar kale. Isniintii, Diseembar 11, madaxa Aqalka Cad wuxuu saxeexay amar lagu oggolaanayo NASA inay dib ugu soo celiso circayaasha Mareykanka dayaxa.
Bayaanka madaxweynaha ayaa ahaa sababta talaabooyinka xigta ee la xiriira xaqiijinta duulimaadkii hore, oo dhacay sanadkii 1972. Ka dib oo dhan, khilaafaadka sanadihii 45 sano ka hor wali hoos uma aysan dhicin. Mareykanku waxay ku adkaysanayaan inay u duuleen dayaxa, laakiin marka lagu daro cajalado maqal ah iyo sawirro leh cajalado fiidiyow ah oo toos ah dusha sare ee cirka astronauts keligood, Mareykanku waxba ma hayo. Midkoodna gantaal kama soo qaadin dhulka dushiisa, kumana xayirin qalabka dalalka kale ee duulista dayax gacmeed.
Malaha, Mareykanku waxay go’aansadeen inay tirtiraan farqiga u dhexeeya taariikhdooda, isla markaana, jaangooya barnaamijka Martian, waxay go'aansadeen inay si rasmi ah u calaamadeeyaan bisha. Khubaradu waxay danaynayeen maalgelinta mashruuca. Runtii, gudaha Mareykanka, waa maxay sanadka miisaaniyaddu ka dhiman tahay, sidaa darteed ma cadda halka ay ku bixi doonto balaayiin doollar oo ka soo bixi doona gudashada waajibaadka uu madaxweynuhu dejiyey.
ThundeaL TD96 - $ 200 Mashruuca FullHD ee Shiinaha
Google wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo soo saarida processor-ka
Dyson V15 Detect - jiil nadiifiyaha jiilka cusub
Huawei Dynacare Smart Turbo - shaver koronto waa $ 35
Dayax gacmeedyada Starlink waxay baabi'inayaan internetka fiilooyinka ku shaqeeya